Yobhi 17 | IBhayibhile Kwi-Intanethi | INguqulelo Yehlabathi Elitsha
17 “Umoya wam waphulwe,+ imihla yam icinyiwe;Indawo yam isemangcwabeni.+ 2 Ngokuqinisekileyo ndenziwa intlekisa,+Yaye iliso lam lihlala phakathi kokuziphatha kwabo ngemvukelo. 3 Nceda, ubeke isibambiso sam kuwe.+Ngubani omnye okhoyo oya kuxhawulana+ nam njengesiqinisekiso? 4 Kuba intliziyo yabo uyivalile ekubeni nengqiqo.+Kungenxa yoko le nto ungabaphakamisiyo. 5 Unokuxelela abalingane ukuba bathabathe izabelo zabo,Kodwa amehlo oonyana bakhe aya kuphelelwa.+ 6 Yaye undibeke njengomzekelo+ kwizizwana,Ukuze ndibe ngumntu ekutshicelwa ebusweni bakhe.+ 7 Iliso lam linorhatyazo ngenxa yokukhathazeka+Yaye onke amalungu am afana nesithunzi. 8 Abantu abathe tye bakujonga oku bethe manga,Kwanalowo umsulwa uyavuseleleka ngenxa yomwexuki. 9 Lowo ulilungisa uqhubeka ebambelele nkqi endleleni yakhe,+Yaye amandla alowo unezandla ezihlambulukileyo+ aqhubeka esanda.+ 10 Noko ke, ngamana nonke madoda ningaqhubeka. Ngoko ncedani nize,Ekubeni ndingafumani namnye ulumkileyo phakathi kwenu.+ 11 Imihla yam idlule,+ amacebo am aqhawulwe,+Iminqweno yentliziyo yam. 12 Ubusuku baqhubeka bebubekela imini:+‘Ukukhanya kusondele ngenxa yobumnyama.’ 13 Ukuba ndiqhubeka ndilindile, iShiyol iba yindlu yam;+Isingqengqelo sam kuya kufuneka ndisandlale ebumnyameni.+ 14 Kuya kufuneka ndimemeze umhadi+ ndithi, ‘Ungubawo!’Kwimpethu ndithi,+ ‘Mama nodade wethu!’ 15 Ngoko, liphi na ithemba lam?+Yaye ithemba lam—ngubani na olibonayo? 16 Baya kuhla baye kwimivalo yeShiyol,Xa thina, sonke, simele sihle siye eluthulini.”+